သာလွန်ဇောင်းထက်| October 29, 2012 | Hits:5,802
| | အမှုရင်ဆိုင်နေရသည့် မနန်းဝိုးဖန်၏ ခင်ပွန်းကို မနန်းဝိုးဖန်၏ ဖခင်က နှစ်သိမ့်နေစဉ် (ဓာတ်ပုံ – သာလွန်ဇောင်းထက် / ဧရာဝတီ)
မောင်တော မွတ်စလင် ၄၈ ဦး အသတ်ခံရမှု သတင်း စုံစမ်းရန် နိုင်ငံတကာ တောင်းဆိုမှု အစိုးရ ပယ်ချကျောင်းကုန်း အဓိကရုဏ်း သံသယရှိသူ ၁ ဦး လွတ်မြောက်နေဆဲသံတွဲ၌ တည်ငြိမ်နေသော်လည်း အဖမ်းအဆီးများရှိအကြမ်းဖက်မှုများ ဆက်ဖြစ်နေမှု အသွင်ကူးပြောင်းရေး ထိခိုက်နိုင်ဟု ICG ထုတ်ပြန်ထန်းကုန်းအရေး ဖမ်းဆီးထားသူများ ရုံးပြောင်းစစ်မည်
ငမိုး October 29, 2012 - 8:58 pm ကောင်မလေးကိုတနေ့၂နာရီဘဲအပြင်ထွက်ခွင့်ပေးတာ၊၂၄နာရီကျော်ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးတဲ့စုံစမ်း
Reply sunny October 30, 2012 - 12:03 pm Thein Sein said rule of law is important but he never enforce the power to act on rule of law. It’s still apply to jungle law in myanmar. The rule never applied to those people work for government related assocations.
လူဦးရေ ၅၁ သန်းကျော်တွင် ပြည်ပရောက် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ မပါသေး
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ရန် သမ္မတ နှင့် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ကို “၀” နှင့် မိုင်းလားအဖွဲ့ တောင်းဆို
မော်ဒယ်လ် သရုပ်ဆောင် အေးချမ်းမြတ်မိုး ဓားထိုး အသတ်ခံရ
ရန်ကုန် ရှေးဟောင်း ယဉ်ကျေးမှု မြို့ပြအမွေအနှစ် ဆိုင်ရာ ဥပဒေ ရေးဆွဲရန် အစီအစဉ်မရှိသေး